ROI dia mampiditra isa ara-tsosialy ho an'ny automatisation marketing | Martech Zone
ROI dia mampiditra isa ara-tsosialy ho an'ny automatisation marketing
Alarobia 16 Janoary 2013 Alarobia 16 Janoary 2013 Douglas Karr
Ny mpanjifa automatique marketing ary mpanohana, Miorina amin'ny Interactive (ROI), nahagaga ny niara-niasa. Fantatr'izy ireo fa ny automatisation marketing dia tsena mitombo ary tapa-kevitra ny hitondra ny làlan'izy ireo manokana izy ireo fa tsy hijery izay ataon'ny olon-kafa. Iray amin'ireo antony mahatonga ny mpampiasa interface interface ho tsotra ampiasaina, haingana kokoa ny fotoana fampiakaran'izy ireo noho ny mpifaninana, ary ny fahaizan'ny rafitr'izy ireo dia miavaka eo amin'ireo mitovy taona aminy.
Izany no antony Troy Burk dia ekena ho mpitarika amin'ny fahatakarana ny fiantraikan'ny isa amin'ny mpanjifa. Rafitra automatique marketing maro no manomboka amin'ny antso-to-action ary miafara amin'ny fiovam-po. Troy dia nanangana ny orinasany foana fa ny fampahalalana ilaina hanovana ny vinavinany mety dia hita amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpanjifanao manokana. Ary toy ny fitsikerana ny fahazoana orinasa vaovao dia ny fiantohana fa miasa ny orinasanao misy ianao. Faritan'izy ireo ho marketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa.
Misy vokatra marobe izay hanampy ny mpivarotra handefa hafatra ara-barotra any amin'ny tontolon'ny media sosialy. Ireo fampiharana ireo dia manampy ny mpivarotra hihiaka ao amin'ny habaka sosialy. Tiako ny miantso ny vokatra toy izany ho "mpandahateny fanamafisam-peo" ho tanjona voalohany ao dia ny manandrana sy manitatra hafatra marketing malalaka ho an'ny mpihaino marobe. Naka fomba hafa tamin'ny fomba fiasa sy ny fiasan'ny haino aman-jery sosialy izahay. Manampy ny mpivarotra izahay hifantoka amin'ny valiny miverina amin'ny fandefasan-kafatra media sosialy ataon'izy ireo. Amol Dalvi - VP na Vokatra sy Teknolojia
ROI Social hamela ny mpivarotra hanara-maso ny hetsika twitter, ny hetsika ataon'ny mpanaraka twitter azy, ary hamaly ireo hafatra twitter.
Ary koa, ny hetsika dia azo ampifandraisina amin'ny Contacks fantatra ao amin'ny kaontinao ROI. Tombony lehibe tokoa izany satria ireo mpikirakira twitter tsy fantatra teo aloha dia Contact tena izy ireo ao amin'ny base database.
Mahery be izany! Ny isa azo ovaina dia ahafahan'ny mpivarotra mitsapa sy mandrefy ny fomba fitondran-tenan'ny Twitter toy ny fanarahana, retweet na hafatra mivantana, misy akony amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Raha hitanao fa ny fitondran-tena amin'ny fiaraha-miasa ara-tsosialy dia famantarana matanjaka amin'ny fividianana fividianana dia azonao atao ny manisy isa ireo avo kokoa noho ireo hetsika hafa ary manitsy ny fandefasan-kafatrao sy ny soronao any ambany. Angamba ianao mahita azy ireo misy fiatraikany kely - mba hahafahanao mamantatra azy ireo moramora ary manamboatra fifamofoana mifantoka amin'ireo fifandraisana ireo nefa tsy manapotika ny banky.
Tags: Scoring 3dmarketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifaMarketing amin'ny fiainana andavan'androautomation marketingmahitsy amin'ny interactiveisa ara-tsosialyisa amin'ny twitter
Torohevitra hialana amin'ny lolompo amin'ny marika amin'ny paikadin'ny mailakao
Janoary 17, 2013 amin'ny 1:33 PM
Miarahaba an'i Troy, Amol ary ny ekipa ROI! Endri-javatra lehibe.